roba-tyred mobile ngwepịa osisi, mobile crusher osisi soplaya
Home » ngwaahịa » roba-tyred mobile ngwepịa osisi
Okwu Mmalite nke roba-tyred mobile ngwepịa osisi
The roba-tyred mobile ngwepịa osisi nwere ike họrọ n'agba crusher, cone crusher ma ọ bụ vetikal okporo mmetụta crusher, etc dị ka ya tumadi etiti, na akụrụngwa na-enyefe crusher evenly site feeder na mgbe ahụ ka a ga-echi ya ọnụ n'ala, ndị crusher ga mejupụtara a mechiri emechi usoro na gburugburu vibrating ihuenyo, dị ka iji kwụsị ihe onwunwe circularly, na mmepụta ihe onwunwe na size ihe a chọrọ n'aka ga-anapụta site na belt conveyors.mobile ihe ngwepịa osisi ọtụtụ-eji Ngwuputa ore ndinuak, ewu n'efu imegharị ihe maka iji, ewu nchịkọta amị, elu ụzọ, ụgbọ okporo ígwè, okporo ụzọ na àkwà mmiri na-ewu, wdg
The Ezigbo Performance nke Rubber-tyred Mobile ndinuak Plant
1.mobile ihe ngwepịa osisi na elu arụmọrụ n'agba crusher na cone crusher. 2.Feeder, belt ebu na jijiji ihuenyo bụ nile na otu.
3.Turn axle nke traction bụ adaba n'ihi na n'okporo ụzọ n'ụzọ na ịgbasa na-arụ ọrụ ebe. 4.Vehicle installational akwado bụ mfe n'ihi na ngwá ọrụ na ebe ke arụ ọrụ ebe.
5.Vehicle electric amụba set, Motors na ịchịkwa igbe na-niile gụnyere.
Vibratory Solutions maka Ájá mkpoko
Aja Powder separator
Aja echetakwa & saa igwe
Aja nhicha Machine
Jijiji echetakwa Machines
grizzly feeder meziri